Tantsoroka eoropeanina: tohanana ny fihariana ambanivohitra | NewsMada
Tantsoroka eoropeanina: tohanana ny fihariana ambanivohitra
Manana fandaharanasa manokana hanatsarana ny fari-piainan’ny mponina sy ny fanjariana sakafo ny Vondrona eoropeanina (UE). Ao anatin’izany ny famatsiam-bola mitentina 12 tapitrisa euros, tombanana ho 54 miliara Ar, avy amin’ny 11è Fed.
Fandraharanasa tantsoroka famatsiam-bola ho an’ny fambolena sy ny seha-pihariana andraisan’ny rehetra anjara ho an’ny faritra afovoan-tany eto Madagasikara ny Afafi Centre. Natao sonia, ny 29 aogositra 2019, ny fifanarahana mikasika azy, tafiditra ao anatin’ny Fandaharanasa tondromarika nasionaly (PIN), ho an’ny taona 2014-2020. Miisa 50 ny kaominina voakasiky ny tetikasa ao anatin’ny faritra Analamanga sy Itasy. Nambaran’ny talen’ny Biraon’ny tantsoroka amin’ny fiaraha-miasa amin’ny UE (BACE) ao amin’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola, Rakotomahefa Bruno Maurille, fa « miisa dimy ny lalam-pihariana voakasiky ny Afafi Centre, ny sehatry ny fambolena (anana sy legioma,…), ny fiompiana (trondro, akoho,…), ny angovo avy amin’ny hazo, ny fananan-tany ary ny ronono. Tohin’ny fandaharanasa Asa, tao anatin’ny Fed andiany faha-10, ny Afafi Centre. Tena nosahanina ny fanofanana ara-teknika sy ny fampitaovana ireo mpamokatra eny ambanivohitra”.
Niova ny fihariana
Anisan’ny nahazo izany ny fikambanana Manampisoa eny amin’ny kaominina Iarinarivo, distrika Ambohidratrimo, faritra Analamanga. Ahitana an-dRtoa Rakotomalala Tantely, mamboly voatabia biolojika, sady miompy akoho fakana nofo. Nahazo fitaovana kojakoja ilaina amin’ny fambolena legioma izy ireo, toy ny siny, ny borety, ny milina gropy, ny siny famonoana bibikely, sinibe fitahirizan-drano, sns. Notsoriny fa niova ny fomba famokarany, ary azo tsapain-tanana ny vokatra. Mampiavaka ny voatabia vokarinay ny tsy fampiasana zezi-bazaha ka azo tahirizina mandritra ny fotoana maharitra, raha tsy toa izany ny voatabia ampiasana zezi-bazaha. Angatahinay ny tranoheva natsangan’ny tetikasa Asa eny Talatamaty mba hampiasainay hivarotana ny vokatra biolojika madiodio. Miisa 1 500 ny akohon-dRtoa Tantely izao, ary 35 hatramin’ny 40 andro dia mahazo mihoatra ny 2 kilao, raha tokony ho 45 andro.
Ahazoana tombony ny trondro noho ny vary
Miompy trondro kosa Rasoloarison Jean Pierre eny Sambaina, distrika Manjakandriana, faritra Analamanga. « Tena ahazoana tombony be ny fiompiana trondro miohatra amin’ny mamboly vary. Ahazoako trondro 50 kilao ny dobo na tanimbary 1 ara (100 m2), mampidi-bola manodidina ny 800 000 Ar (50 kgs x 16 000 Ar) nefa manodidina ny 100 000 Ar (50 kgs x 2 000 Ar) monja raha vary. Mampanatody trondro izy ary manodidina ny 5 000 isan-taona ny zana-trondro azony, raha 2 000 talohan’ny tohana azony tamin’ny tetikasa Asa.